निरुताले चलचित्र क्षेत्र छोड्दा झुर थियो त माहोल ? | Celebrity Nepal
काठमाडौँ: चलचित्र ‘दर्पणछायाँ’ भन्ने बित्तिकै धेरैको मानसपटलमा अभिनेत्री निरुता सिंहको आकृतिले ठाउँ बनाउन थाल्छ । झण्डै एक दशक भन्दा लामो समयसम्म एक छत्र चलचित्र क्षेत्रमा राज गरेकी अभिनेत्री निरुता सिंह एकाएक चल्दा चल्दै चलचित्र क्षेत्रलाई चटक्कै छोड्दा उनका थुप्रै फ्यानहरु अचम्मित भएका थिए। आज सम्म पनि धेरैलाई थाहा नहुन सक्ला कि निरुता सिंहले चलचित्र जगत किन छोडिन ? यस बारेमा निरुतालाई प्रश्न गर्दा उनको एउटै उत्तर हुन्छ कि झुर माहोलको कारणले उनी बारम्बार एउटै कुरा दोहोर्याउदैथिन कि जुन बेला मैले चलचित्र क्षेत्र छोड्ने निर्णय गरे त्यो मेरो करीयरको लागि सहि थियो, उनी थप्छिन झुर व्यक्ति, झुर माहोलमा मलाई फस्नु थिएन त्यो बेला मैले यो क्षेत्र नछोडेको भए आज दर्शकले मलाई जती माया र साथ दिनु भएको छ त्यती माया र साथ मैले पाउने थिइन ।
त्यसो त दर्शकबाट माया पाउन कै लागि उनी यो क्षेत्रबाट टाढा भएकी भने होइनन् । दुई दिन चलचित्र हेरेकै भरमा आफु डाइरेक्टर हुने पैसा भएकै कारण निर्माता बन्ने होड्बाजी आफुलाई त्यस्तो ठाउमा रहिरहन उपयुक्त लागेन खराब ब्यक्ती खराब प्रवितीको हाबी हुन थाल्यो मैलें त्यस्तो माहोलमा काम गर्नु भनेको मेरो स्तर गिराउनु हो, मेरो उचाइ गिराउनु हो तर दर्शकबाट पाएको त्यो उचाइ मलाई गिराउनु थिएन । त्यसैले मैले यो इन्ड्रस्ट्रि छोडे उनी थप्छिन , मैले यो निर्णय हतारमा वा एकदिनमा लिएको निर्णय थिएन धेरै सोचबिचर गरेपछी मात्र छोडेकी हुँ । यति भनिरहदा उनी एकदम भाबुक बनेकी थिइन।
के निरुताले चलचित्र छोड्दा झुर थियो त माहोल ?
निरुताले भने जस्तै एक दुई दिन सूटिङ हेरेकै भरमा डाइरेक्टर हुन्थे त कोइ पैसा हुने बित्तिकै चलचित्र निर्माता भईहाल्थे । जस्लाई यस क्षेत्रको ज्ञान नै छैन उ यस क्षेत्रमा मोज मस्ती कै लागि होमिन्थे । अझ कतिपयले त नायिकालाई आफ्नो मोज मस्तीको साधनकै रुपमा पनि प्रयोग गर्थे । कला नभएका पनि नायिका हुन्थे त रुपकै भरमा पनि जबर्जस्ती चलाऊन खोजिन्थ्यो । जुन बेला चलचित्र क्षेत्र एकदम नै नाजुक बनिसकेको थियो । चलचित्र जगत भन्ने बित्तिकै धेरैले नाक खुम्चाउथे मान्छेहरु चलचित्र हेर्न मन पराउथे तर आफ्नै छोराछोरीलाई चलचित्रमा काम गर्न रोक लगाउथे यस्तै माहोलका कारण त्यो बेलाका अभिनेत्री जल शाह, बिपना थापा लगायतले एकपछी अर्को गर्दै यो क्षेत्र छोड्दै गए ।
अझै पनि झुर नै छ त चलचित्र क्षेत्र?
यसै यकिनका साथ भन्न सकिन्न तर कोही त्यस्ता तत्वका कारण भने सम्पूर्ण चलचित्र क्षेत्रलाई नै धमिल्याउन भने मिल्दैन । बिचका केही समय त्यस्ता ब्यक्तीका कारण चलचित्र क्षेत्र नराम्रो भय पनि अब त्यस्तो अवस्था छैन । संसार डिजिटलाइज् भइसकेको छ । नयाँ पुस्ता धेरै अगाडि बढी सकेका छन । बुझ्दै नबुझी होमिने भन्दा पनि बुझेर पढेर मात्र आउन थालेका छन अबका पुस्ता । अबको नेपाली चलचित्र उद्योगको भबिस्य पनि राम्रो छ ।